विश्वकपमा कस्की प्रेमिका कति राम्री ? (भिडियोसहित)::Nepal's Online News Portal
विश्वकपमा कस्की प्रेमिका कति राम्री ? (भिडियोसहित)
बिहि, असार ३, २०७५
स्पेनिस भर्जनमा आयोजना भएको एक्स फ्याक्टरको सन् २००५ एडिसन जितेपछि इडुमी गार्सिया अल्माग्रो धेरै युवाको नजरमा ग्ल्यामरस युवतीको रुपमा परिन् । एक्सफ्याक्ट्मा जानु भन्दा अगाडी नै उनले स्पेनकै राम्रो पप गायिकाको रुपमा आफ्नो फेम कमाइसकेकी थिइन् ।
ग्ल्यामरको दुनियाँमा पहिचान बनाउदै गएकी गार्सियालाई स्पेन गट ट्यालेन्टको जजमा राखेपछि के चाहियो र । सन् २०१० मा स्पेनका गोलकिपर डेभिड डि गिया म्यानचेष्टर युनाईटेड स्थानान्तर हुने तरखरमा थिए । त्यो बेला एउटा सामाजिक सेवाको रुपमा गिती संग्रह निकाल्ने तयारी भएको थियो ।
उक्त तयारीको क्रममा स्पेनकी ट्यालेन्टेड गायिका एवं सेलिब्रेटी गार्सिया र डेभिडको पहिलो भेट भएको थियो । यो समाजिक सेवाको कामले दुबैलाई प्रेमको बन्धनमा बाँध्दै लग्यो । गार्सिया र डेभिडले आफ्नो प्रेमलाई टाढा टाढा फैलाउन छुट्टिको समयमा लामो यात्रामा विताउने गर्छन् । स्पेनिस युवाका ड्रिम गर्ल गार्सिया र स्पेनिश युवतीका हंक ब्वाईको रुपमा रहेका डेभिडको जोडीले मैदानबाहिर निकै चर्चा पाउने देखिन्छ ।